Iwo maindasitiri makuru ari kushanduka kuita mafemu emutengi anotenderera pane zvinodiwa uye zvinodiwa nevateereri vanonangwa. Kudyidzana kwakawedzera pamusoro pegore nerubatsiro rwe mobile uye dandemutande budiriro. Kwete izvi chete, asi zvakare inoshandiswa kutepfenyura meseji pamwero mukuru. Izvo zvirimo zviri kuramba zvichiwedzera kukosha nekufamba kwenguva, kubata kutarisisa, uye kuwedzera kuomarara kune manejimendi yekubatanidzwa kwemutengi. Iwe haugone kuvanza iyo yakashata sevhisi kubva kune mutengi achipa kutonga kwakazara kune vateereri.
Iyi yese maitiro inoenderana neiyo data masayendisiti ane basa rekunzwisisa zvinodiwa nevatengi uye kuongorora iyo data kubatsira timu yekushambadzira kutaurirana nemutengi nerubatsiro rwekuwedzera kupesvedzera kuita. Nekudaro, nekuda kwekuti data ichaongororwa hazvireve kuti hauzoda timu yekushambadzira. Vatengesi ndivo hwaro hwakakosha hwebhizinesi rako sezvavanonzwisisa maonero, zvitendero, uye zvishuwo zvemutengi. Zvisinei, basa re data sainzi unova mubvunzo.
Kana iwe uchifunga kuti data hombe ndeyekuunganidza nhamba saka iwe unofanirwa kuvandudza ruzivo rwako pairi. Nekushandurwa kwakazara mune tekinoroji, data hombe rave nyaya hombe yekubata nayo. Kune dzakawanda data analytics zvishandiso zvinosanganisira machine learning izvo zvave zvichishandiswa nemakambani kushandura hombe dhata mukufunga iyo inoshandiswa sekutengesa pfungwa.